rafitra fanamafisam-peo fampidinana matetika ho an'ny forging, fananganana mafana, sns
Home / Induction Power Supply / Rafitra fanamainana hafanana MFS
Sokajy: Induction Power Supply, Media Series Frequency Tags: indraindray, fanaovana annealing matetika, fanaovana hosoka matetika, mpanelanelana matetika, fampitaovana hafanana, Fampiasana fitaovana fanamafisana hafanana, fampiasana fitaovana fanamafisam-peo matetika, Meny fitetezana, Ny rafitra fanamorana hafanam-be, Famolavolana mafana matetika, ny hafanana mahazatra, preheating matetika matetika
rafi-panafanana fampidinana matetika antonony sy famatsiana herinaratra
Rafitra fanamafisana induction matetika (Andian-tsarimihetsika MFS) dia zahana amin'ny alàlan'ny elanelam-potoana 500Hz power 10KHz sy ny power100 ～ 1500KW, izy ireo dia ampiasaina amin'ny fanamainana mafana, toy ny fanamainana rod ho an'ny famolavolana, fanalefahana, fampidirana ary fanafana mialoha ho an'ny welding. Noho ny halavan'ny halavany, ny vokatra azo avy amin'ny fanafanana dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny famolavolana mba handinihana ireo anton-javatra rehetra toy ny faniriana hiditra, ny fahombiazan'ny fanafanana, ny tabataba miasa, ny hery manetsika andriamby sns.
Ao amin'ny masinina matetika MFS matetika, rafitra oscillating mifanila no ampiasaina. Ny singa herinaratra modely IGBT sy ny teknolojia fanaraha-maso inverting an'ny taranaka faha-efatra dia ampiharina mba hiantohana ny kalitao avo sy azo antoka. Ny fiarovana tanteraka dia raisina toy ny fiarovana amin'izao fotoana izao, ny tsy fahampian'ny rano, ny fiarovana ny mari-pana, ny fiarovana ny herinaratra, ny fiarovana fohy ary ny fiarovana ny dingana tsy mahomby. Rehefa miasa, ny output amin'izao fotoana izao, ny output voltage, ny oscillating matetika ary ny output power dia aseho eo amin'ny tontonana miasa mba hanampiana amin'ny famolavolana coil sy hanitsiana ny masinina.
Miorina amin'ny fampiasana samihafa, rafitra lehibe roa no ampiasaina:
(1) firafitra 1 ： mpiorina MF + capacitor + coil
Ity firafitra ity dia raisina matetika amin'ny fampiasana maro, toy ny tsorakazo induction heating machine sy ny milina mitsonika. Tsotra ity rafitra ity, ambany very ary mahomby be amin'ny fanafanana.
Amin'ity firafitra ity dia matetika fantsona varahina 3 ka hatramin'ny 15 metatra no ilaina hanaovana ny coil; ny voltan'ny coil dia avo hatramin'ny 550V, ary tsy mitokana amin'ny rafitra famatsiana herinaratra, noho izany ny coil dia tsy maintsy voahidy tsara mba hiantohana ny fiarovana ireo mpandraharaha.
） 2） rafitra 2 ： mpiorina MF + cap + transformer + coil
Ity firafitra ity dia ampiasaina matetika ihany koa, toy ny mitsonika ao anaty banga, matetika salantsalany induction hardening machine sy ny sisa. Amin'ny alàlan'ny famolavolana ny tahan'ny mpanova, ny fivoahana ankehitriny sy ny herinaratra dia azo fehezina mba hanomezana fahafaham-po ny faniriana fanafanana hafa.
Amin'ity firafitra ity, ny coil dia azo antoka ho an'ireo mpandraharaha, ny fantsom-piterahana dia afaka miharihary mivantana tsy misy insulation. Coil dia mora atao amin'ny fihodinana vitsivitsy fotsiny. Mazava ho azy, ny trafo dia hampitombo ny vidiny sy ny fanjifana ny masinina.
Models Ny fahefana output Fahatezerana matetika Fampidirana ankehitriny fahan'ny malefaka Dingana famaranana Rano mikoriana lanja lafiny
Volavola fanehoan-kevitra momba ny herinaratra ary alao ny boriborin'ny resonans LC andiany IGBT miorina.
Teknolojia fanodinana IGBT, fiovam-po lehibe mihoatra ny 97.5%.
Miakatra 30% ny angovo raha ampitahaina amin'ny teknolojia SCR. Ao amin'ny boriborin'ny resonance andian-dahatsoratra, coil fampidirana misy herinaratra avo sy ambany ankehitriny, noho izany dia ambany dia ambany ny famoahana angovo. Ny teknolojia switch malefaka ampiharina dia very ambany ny fatiantoka switch.
Afaka manomboka 100% izy io amin'ny toe-javatra rehetra.
100% cycles duty, 24hours fahaizana miasa maharitra amin'ny hery fara-tampony.
Tsy dia mirindra ankehitriny sy ny anton-kery lehibe. Ny herin'ny herinaratra dia mijanona 0.95 etsy ambony foana mandritra ny fihazakazahan'ny masinina.
Ny teknolojia fanaraha-maso mandeha ho azy dia mamela ny herin'ny herinaratra hijanona ho avo lenta mandritra ny dingan'ny fanafanana.
Azo itokisana tsara, IGBT dia transistor famonoana tena izay miantoka ny fivadihana amin'ny fahombiazana ary mandray fiarovana eo noho eo; IGBT nampiasaina avy amin'ny orinasa infineon, mpanamboatra malaza eran-tany.
Mora ny miasa sy mitazona, ny generator fampidirana IGBT MF dia mora sorohina sy voatazona noho ny rafitr'izy ireo. Manana fiarovana tonga lafatra izy io.
Kitapo misy lafaoro fanafanana, karazana samy hafa namboarina lafaoro fanorana araka ny ilain'ny mpanjifa.
Fanaraha-maso ny mari-pana.
Fanamafisana mekanika an'ny CNC na PLC ho an'ny fampiharana mihamafy.
Rafitra fanamafisana rano.
Mpanome tsorakazo pneumatika.
Rafitra fanamainana mandeha ho azy manontolo namboarina.
Fametahana / famoronana mafana ho an'ny workpiece lehibe.
Fanamafisana ny velarana amin'ny ampahany lehibe.
Fanafihana ny fihenan'ny fantsona.
Fanamafisana ny fantson-drano.
Mitsonika amin'ny alimo varahina sy ny sisa.
Mihena-mety amin'ny sandry amin'ny roller.
Fampandrenesana fanodikodinam-bokatra sy fantson-drano amin'ny IGBT Moudle